[Pfungwa] Sei KaOS ari musanangurwa wangu? | Kubva kuLinux
[Pfungwa] Sei KaOS ari musanangurwa wangu?
Aioria | | Zvimwe
Ichi chinyorwa changu chekutanga mu KubvaLinux Ndave ndiri muverengi asingachinji weblog kubvira payakatanga uye munguva yayo ye Ngatishandisei Linux. Nguva dzose uchitsvaga kuverenga kuti uwane ruzivo mune ino inonakidza nyika uye inoshamisa nyika.
Muchisiko ichi ndakave nekukwira nekudzika ndakaedza mukushanya kwangu kwakawanda kugovera kubvira Redhat, Debian, Mandriva, Mageia, Rosa Frehs, Opensuse, Chakra, Ubuntu nezvose zvinonaka.
Kana iri yedesktop nharaunda kubva kune yakakura se Kde, Gnome, Cinnamon, Kubatana uye akareruka iwo Xfce, Lxde, e17, fluxbox pakati pevamwe vanopunyuka. Kuva wandinoda KDE Yaigara iri kubva pakutanga kwangu mudiwa kubvira yayo vhezheni 3.
KaOS kubva pakuenda kwayo ndakakweverwa kune ino distro sezvairi KDE uye zvinoita sekunge kwaiuya neakanakisa eiyo 64bits aratidziro ese Qt echokwadi anonyanya kushandiswa gtk Chemhondoro Firefox, Chrome y LibreOffice pakati pevamwe.
Ehe ndinofanira kupa mbiri kune izvo zvakaitwa na yoyo308 sezvo anga ari mumwe wevanosimudzira ino system, ruzivo rwake rwakabatsira zvakanyanya kunditungamira nepasuru Pacman.
Yakanga yagara ichibva kune RPM pasuru ne mashiripiti 4 Ndichiri kuyedza asi KaOS yakandipa iyo itsva yekuravira nekugara ndiri up-to-date, kwete chete zvakandibvumidza kuunganidza mapakeji nekuaisa, chimwe chinhu chandanga ndisina kuwana zviri nyore pane mamwe masisitimu andaizo ndaedza.
Mufananidzo wake mutsva unopa kutsva uye kusimba kune iyo distro yakandibata ...
Con KaOS iwe uchagara uri pamberi mu KDE Kwandiri nzvimbo yakazara kwazvo yedesktop ... Neizvi uye zvimwe zvikonzero zvakawanda ini ndinokurudzira iyi kugovera kuti kunyangwe iri kutanga iri kutora nhanho dzakanaka dzekuti kugove kunofanirwa kuve GNU / Linux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Zvimwe » [Pfungwa] Sei KaOS ari musanangurwa wangu?
Zvakanaka ... munhu wese anosarudza anonyatsoroora ... Uye KaOS inzvimbo yakanaka kwazvo, ndakaiyedza uye ndakaifarira asi ndakaibvisa pasvondo rapfuura nekuti inoisa Google-Chrome uye ndinofarira Chromium kana SRWareIron; Ini ndakabvisa ese Calligra nekuti haienderane nezvavanonditumira kubva kubasa, ZVESE zvinouya kwandiri muMSOffice (kunyangwe ini ndakaisa LibreOffice uye inoshanda mushe); Ini handina kukwanisa kuisa Flareget, youtube-dl, Hubic uye Viber; Ini ndinoda Skype yebasa rangu uye haina kuiisa, uye Dropbox neVirtualbox hazvina kundishandira kwemamwe laps pane andakapa uye zvidzidzo zvandakaverenga, saka kunyangwe ichinyatso shanda haishande zvandinoda, saka ini akadzokera Kubuntu naNetrunner.
Icho chiitiko changu, asi hazvireve kuti hachisi kugoverwa kwakanaka, zvinoenderana nezvaunoshandisa iwe.
Iwe unofanirwa kuitevera mumaforamu, chinhu chromium sekutaura kwayo FAQ, havaisanganise nekuti havadi zvikumbiro zvakawanda (kana iwe uine ruzivo unogona kuzvinyora iwe pachako kana kukumbira mumwe munhu kuti aise pkgbuilds to the KCP) the same with flareget uye Ivo vese vaunotaura (chero vasiri 32-bit) zvine chekuita skype, demm (musimudziri) sezvo kaos isingape 32-bit rutsigiro, mhinduro ndeyokuita xp uye unomhanya uchibva ipapo (ini handinyatso kuziva dambudziko rawave uine virtualbox saka ndingadai ndisingazive kuti ndokubatsira sei) uye nedropbox, zvinoita kwandiri kuti wakave nerombo rakaipa rekumisikidza panguva apo dropbox raive rakakanganisa mune akati wandei distros (nekuti mumaforamu eakasiyana ma distros vakataura chinhu chimwe chete ichocho uye mhinduro yenguva pfupi (yaive isingawanzo xD) yaive yekuirodha pasi nemaoko uye kuitisa maitiro mu backgroud (&) uye nechimwe chikonzero yaive xD
Ndine urombo, asi ini handigovane komendi yako zvachose. Kana iwe uchida skype, nei uchifungidzira kana chero distro yakanyanya kana kushoma yakakura iine package? Izvo hazvina musoro, uye ndizvo zvinoita chromium. Ini handinzwisise kukurudzira vanhu kuti vaedze distro isingasangane neayo "anofanirwa kunge aine" mapakeji.
Pindura kune luthenis
Haisi maonero angu, iri mune iyo FAQ yeiyo distro, uye ine zvikonzero zvayo (ini ndinovimba nemamwe mapakeji ari makumi matatu nemaviri, saka ini handishandise, nerombo rakanaka haisi Skype uye handifunge se "ndinofanira kuva") pasina Zvisinei, zvikonzero izvo demm inofumura muFAQ zvinoshanda chose, kwemakore gumi nemakumi matanhatu nemazana matanhatu mabheji ave aripo, inguva yeavo vanoita software kuti vasiye mabhuru http://kaosx.us/faq-es/#Por_qu_no_hay_aplicaciones_de_32_bits
Inochengetwa nemunhu mumwechete kuKaOS uye inofanirwa kuwedzera pakati pemakumi mapfumbamwe nemazana maviri emamwe mapakeji, kungova neaya makumi matatu nematatu maapp ... hazviite zvine musoro, saka ini ndinosimbisa kuti KaOS haitsvake kuve chero chero munhu, asi "kune wese anokodzera poncho"
Kana pachinzvimbo chekubhurawuza iwe ukaenda kuKaOS saiti iwe waizonzwisisa kuti nei Skype kana chero imwe 32-bit application isipo kana ichave iripo.
KaOS akazvarwa sekuvandudzwa kweumwe wevakuru Chakra devs mushure mematambudziko nechikwata panguva iyo paanofunga kuvhura nekuisa chiratidzo chake mukuita mune distro yakagadzirirwa uye kutungamirwa naye.
Kubva pakutanga zvaive pachena kuti iyo distro yaizotarisana nevateereri, vakasarudzika chaizvo vaizotsvaga kuzadzisa zvese zvavanoda: vatengi veIT veanogadzira distro, vazhinji vacho varidzi vemabhizimusi emuno nemabhizinesi madiki.
Iyo nyaya yekurongedza chete makumi masere nematanhatu ekunyorera ine chekuita neruzivo rwake uye nezvaanofarira, ane chokwadi chekuti mugore ra64 zvinonyadzisa kuramba uchishandisa ma2014-bit maapp paHW 32-bit kana anopfuura makore gumi apfuura (64) iyo HW yatinoshandisa nhasi yakaunzwa.
Chero zvazvingaitika mutadzi - kana zvisiri! - Microsoft yekutevera marongero ayo akashata uye kusaita zvayinofanira kuita, mune ino kesi inofambisa Skype kuenda kuma64-bits kamwe uye zvachose.
Izvo zvakati uye zvine chekuita neyako yekupedzisira ndima, nderipi dambudziko rekuti mumwe munhu aburitse chinyorwa chakadai ichi achiudza kuti nei vachida distro yavanoshandisa zvakanyanya uye kukurudzira vanhu kuti vayedze? Chinhu chevanhu chaizvo kuda kugovana zvatinoda.
MUCHOKWADI, mugadziri weKaOS aigara achinyatsojekesa kuti haafarire kuumba nharaunda hombe (uye anozvitaura ZVINONAKA pane yake saiti), kana kutosvika kune vamwe vashandisi kupfuura izvo zvakatanga kutarisirwa sezvo chinangwa chake chiri pamusoro pehuwandu.
Takataura kakati wandei pamusoro penyaya iyi apo distro yaive mumatanho ayo ekutanga uye kunze kwekumupa ruoko mune dzimwe nyaya dzakamuka panguva iyoyo, ini pachangu ndakamukurudzira kuti azivise kuvandudzwa kwake kweiyo distro ndichigara ndichijekesa kuti yaive kwete kuzova distro yemunhu wese asi kune avo chete vanozvigamuchira sezvazviri.
Usati waenderera mberi nekuratidzira mahara nezve chimwe chinhu chausingazive - uye ramba uchinyanya kuseka muchiito chimwe chete ichocho - ndinokukoka zvakare kuti uverenge kuti nei iyo distro pawebhusaiti yayo uye unoshanyira irc chiteshi che distro.
Ini chete ndinoziva kuti mushandisi ari pamusoro pezvose uye kwete nekubvisa chirongwa kubva kudistro yatinoshandisa katsi ina, Microsoft ichaisa mabhatiri.
MuKaos iwe unongowana chete package ye 64-bit architecture, ndiko kuti, zvinoshandiswa zvinoshandisa 32-bit maraibhurari hazvizove muKaOS
Dropbox 2.6 iri mune repos uye nezvezvimwe zvirongwa iwe zvaunogona kubvunza nharaunda yekaos paGithub, sezvo pa32bit panenge pasina ...
Kawaii ~ akadaro
Saka haimhanye comix? Yaizoverenga sei maoko angu? : c
Pindura Kawaii ~
Ini ndanga ndichiri munguva pfupi yapfuura muLinux iyi, ndakaedza akati wandei maros uye ini ndakasarudza openuse pakati peavo ini ndakaedza mpues ini ndinofunga kuti ndiyo iyo iyo KDE yakandinakira. Mubvunzo ndewokuti, chii chine KAOS icho Opensuse chisingaite?
Kuvonga uye zvakanakisisa matauriro.
Pindura kune simbi
Well opensuse ndechimwe cheakakura kwandiri ndeye maonero ako Kaos anotarisa zvakanyanya pa KDE = QT ine 64-bit dhizaini zvimwe zvinhu zvaunogona kuisa mu openuse hazvizove zvakafanana muKaos sezvo isina chinhu 32bit uye mu kaos iri kutenderera kuburitsa ndiko kuti, Kaos ichagara iine chinhu chekutanga munzvimbo yeKDE kupfuura chero kumwe kugovera ...
Uye saka chimwe chinhu chisina kugadzikana kupfuura openuse. Aihwa?
Pindura kune metalus666
Ini handizive zvaunoreva nekusagadzikana Kaos ine yakagadzikana respos uye repos yekuyedza KDE mukati mawo iri yakagadzikana enotorno ini ndinofunga kuti panguva ino muGNU / Linux ini ndasara kumashure mune zvese zvese zvakagadzikana izvozvi nekuti kune mamwe ma distros iyo inopa zvirinani kusangana kwemapakeji avo ndiKaos ...
Iwe unoda yakanaka KDE? http://www.ChakraOS.org
Sezvo iwe waishandisa openSUCIO kana uchiedza Chakra hautende nekumhanyisa, kumhanya uye runako rwe distro.
Zvakasviba? Kutaura kwakashata zvakadii.
Opensuse ndeye yakakomba distro, iro basa revanhu vazhinji harigone kuzvidzwa nenzira iyoyo.
Ndiri kuona kuti handisi kuzosiya kusahadzika.
Kwete, zvakanyanya OpenSUSE iri kusvuta yakasviba. Chii chiri kukura kukuru? Ehezve, chii chakatsiga? Hongu, zvakare ... asi hazvibvise tsvina.
Suse ndeimwe yeakanyanya kusvibiswa distros padanho redundant mapakeji, ndiudze nei vaviri mapakeji mamaneja akaisirwa nekutadza? YaST uye rimwe racho rakangondisiya, amai vari kubhabhatidza kuti mumwe munhu andiyeuchidze mune zvakataurwa pazasi, ndapota.
Kune zvinhu zvakawandisa zvisina basa muSuse izvo "zvinouya kuzadzikisa" zvido zvemunhu uye kuti kushoropodzwa kunobva kune vanozvishandisa ivo pamwe nenharaunda.
packagekit + apper (nekuti haigadzirise makakatanwa senge YAST…. Ini handinyatso kuziva kuti izvi ndezvipi ..)
Saka, kwauri iwe wakasviba kuri kuisa vaviri mapakeji mamaneja nekumira? Zvinoshamisa! Uye ini handisi kutaura nezvaSuse, ndiri kutaura nezve openuse, hazvina kufanana. Ndichiri kuzopa Kaos mukana, asi hausati wandiudza kuti chii chakawedzera kukosha kuuseuse kana kubuntu.
OpenSUCIO? Hmm, iye anoda kurira senge anotsvinya, asi zvinongoramba zvichingori troll ...
Zvakawanda zvisirizvo uye zvisemantic zvikanganiso kupfuura yakakurumbira bepanhau.
AHAHAH, iripi iyo +1 ???
Ndakaishandisa kubva pakutanga uye yakakosha kugadzikana uye kuburitsa-kuburitsa. Asi nekuda kwekushomeka kwema32bits maraibhurari ndafunga kuenda gentoo.
Iwe unorasikirwa nezvinhu zvakawanda zvakanaka semitambo
Izwi rekuti "solid" rakamira kuita zvine musoro mukati meLinux ecosystem, nekuti iyo distro iri kukwidziridzwa / kushandiswa INOGARA yakatsiga uye tagline "haina kumbondipa chero matambudziko" inowedzerwa. Ndine matambudziko kunyangwe naDebian akatsiga uye pasina kushandisa ekunze mapakeji, saka ini handizive, ndinofanira kuve anonyanya kushatisa mushandisi weGNU / Linux pasi pano ...
PS: Hapana chinopesana neKaOS, chandisina kuyedza, asi mwedzi mishoma yapfuura Manjaro yakapihwa yakawanda hype, ndakaiyedza uye mushure mekuisa Liferea yakatonhora. Uye yaive "yakatsiga" ...
Hongu changamire, tatova vaviri vedu, uye zvinonditsamwisa zvikuru kana nechimwe chikonzero ndichifanira kutangazve nechisimba nekuti vakandivimbisa kugadzikana, zvisinei ndinoda gnu / linux uye ndichaishandisa kusvikira ndachembera.
Linux haina kukwana izvo hapana mubvunzo, hapana chakakwana. Asi izvo kunyangwe naDebian une matambudziko, uye kuti haisi Debian chete asi akati wandei ma distros, unofanirwa kunge uine hardware isingaenderane kana chimwe chinhu kunyanya.
Pindura kuna R3is3rsf
Haisi kunyunyuta kuLinux, asi kune yakadzikama makomendi, akawedzeredzwa mumaonero angu.
Uye harisi dambudziko rehardware chero: forums.debian.net/viewtopic.php?f=6&t=110150. Ini ndinofunga Debian ndiyo yakanakisa distro, asi kwete iyo inotadza kushomeka uye zviputi zvandataura kusvika parizvino zvapfuura ... Ndiyo distro yangu, asi zvinhu sezvazviri.
Williams Fields akadaro
Ini ndanga ndichida kuyedza KaOS asi ndine 32-bit pc, pane nzira here yekuita kuti ishande pamakomputa ane hunhu ...? ndatenda.
Pindura kuna Williams Campos
Kwete kungovakwa x86_64
une processor ipi? (Kana iwe uri paGnu / Linux unogona kuziva kuburikidza: kati / proc / cpuinfo | grep "zita remhando" kubva kune chinouraya)
lscpu | grep "CPU op-mode (s):"
Mark Serrano akadaro
Yakanaka kwazvo distro, asi ini handina kukwanisa kuiisa ne DUAL-BOOT yeWindows 7 64b, sezviri pachena ini ndaifanira kushandisa rese rakaomarara dhisiki uye nezvikonzero zvebasa ini handikwanise kudzima chikamu che winbugs,
Pindura Marcos Serrano
Kana ichigona kuiswa palaptop yangu, tanga waisa windows 8.1 64 bit uyezve ini naKaos takanga tisina matambudziko, iyo grub yakaziva windows kugovera pasina matambudziko ... ikozvino uefi imwe nyaya ...
Hakuna steam? Hapana chimwezve chekutaura, kunyangwe chiri chakanaka sei, chinoramba chichishandiswa neboka diki kwazvo revashandisi, izvo zvisina kushata zvachose.
Zvekurara kwemavara, uye muLinux mune ma distros erudzi rwese rwemushandisi.
Ivo vanoita basa rakanaka kwazvo neiyi distro, imwe imwe sarudzo neine simba Pacman.
Ndatenda nekutaura 😉
Nezve Dropbox muKaOS, ndaneta nekuitsanangura, vanhu vakaipisisa havanditeerere kana kunditeerera. Kunouya nguva apo iwe paunosvika pakuneta nekuidzokorora uye nekuisiya iyo yakarasika. Pamwe ini ndinotumira chimwe chinhu pane yangu blog.
Nezve makumi matatu nematatu kana zvirinani, kwete makumi matatu nematatu, zvakatotsanangurwa kane chiuru, handizozvidzokorora.
Usati wafunga nezveKaOS, verenga yayo FAQ, iri muchiSpanish, saka iwe unozoziva kana KaOS iri kana isiri iyo distro yauri kutsvaga…. usaende kunogadzira distros kunge anopenga pasina chero ruzivo, zvino chii chinoitika chinoitika.
PS: Kuti mumwe munhu haakwanise kuisa chimwe chinhu muKaOS (kana chero imwe distro) hazvireve izvozvo
PS: Kuti mumwe munhu haakwanise kuisa chimwe chinhu muKaOS (kana chero imwe distro) hazvireve kuti hazvigone kuitwa, iko kusaziva uye kusaziva kuri mahara.
(ndisati ndakanganisa kurova kupinda ndisati ndapedza chirevo changu chekare, saka ndinodzokorora izvi)
Kana iwoyu mubvunzo wakadzokororwa zvakanyanya, zvinofanirwa kunge zviri zvechimwe chinhu kana kwete?
Ehe, nekuda kwechikonzero chakareruka chekuti vanhu havatomboverenga iyo Push uye yekudhonza zviratidzo pamikova. Zvese zvaunoda kuti uzive zviri muChirungu neSpanish pane distro peji.
Pindura kuna dago
Iyo yakanaka kwazvo, asi ichiri mhando ye linux chakra, ine zvishoma kana zvishoma diki package package uye ine imwechete chete dev iyo inoisa iyo distro kumusana kwayo. Inonhuwirira seSolusOS inodzokera kwandiri.
Yakanaka kwazvo sarudzo, asi 64bit chete?
Izvo zvinogona kuomesa zvinhu ini zvandinoda kuramba ndichishandisa ArchLinux, uye ndokupa mashoma mashoma uye ndizvozvo 🙂
Usakanganwa kuti KaOS yakakoshwa uye chinhu chega icho 'chinogovana' neArch pacman, kunyangwe iyo maratidziro ehurongwa inoenderana neArch 😉
Zvakanaka kwazvo kwandiri. Inokurumidza uye inoshanda. Chakanaka chinotsiva apo Chakra ari mukoma.
Ndiani akakuudza kuti Chakra iri pakoma? Wamboedza Curie ??
Uyezve, KaOS haife yakatsiva Chakra. Kungoti nekuti ivo vaviri vanoshandisa KDE uye pacman iwe unofunga kuti KaOS inogona kutsiva Chakra? Zvakashata.
Kunyangwe iyo KaOS Git repo iri sarudzo inonakidza, haiswedere padhuze nekuchinja kweCCR / AUR, iyo yakachena 64-bit - UNOGONA KUZVINA IYO MUCHAKRA, MUCHOKWADI CHAKRA OS INOISWA CHETE 64-BITS UYE KDE - unozvichengeta muhomwe yako kana uchifanira kumhanyisa Skype kana Steam kana chero chimwe chirongwa, tisingataure kana uchida Gtk app uye unofanirwa kumirira ivo kuti vape kuenda-mberi kuti vakuwedzere kana, seChromium , ivo vanofunga kuti iyo app yaunoshandisa uye iwe yaunofarira iri redundancy uye haizombofa yakatsigirwa zviri pamutemo - nhoroondo ye linux: kugara nevane tsvina vanyoro kugadzirisa zvese wega.
Nah murume Chero ani wako chirevo, iwe unoshatiswa kuziviswa.
@msx @ truko22 iyo «ma Knights ehurongwa hwe Chakra» (? xD jajajja
Chakra iri pakoma, hauzive zvauri kutaura nezvazvo 😀
Ndakaiyedza mumuchina chaiwo uye ndakaufarira zvakanyanya, asi nokutendeseka, kuva neArch Linux ini handione kuti inondipa chero chinhu asi inotora zvandinogona. Ehezve, kuisirwa kuri nyore zvikuru. Kune rimwe divi, ini ndoda hunyanzvi saka ndinazvo pamushini wangu (zvese paKubuntu neArch Linux).
Kunze kwekufunga kwega kwega kwekugovera, kwandisina kuyedza, ndinoona chinhu chimwe chakajeka: uyu anovandudza ane zvinhu zvakajeka. Uye kwandiri inopindura kune chaiyo pfungwa yekugadzira kugovera. Ndiri kureva, nei uchienda kumatunhu akareba kuchengetedza 32-bit mapaketi? Nei uchitsvaga chikamu chepamusoro chevashandisi? Iko kuchinjika kweLinux kunobvumira mapurojekiti akadai kuti amuke uye ndechimwe chezvinhu zvinobva pasoftware yemahara: kuchinjwa zvinoenderana nemushandisi.
Sezvaanopokana zvakanaka, kushandisa makumi matatu nematatu mashandisirwo kana anga ave anopfuura makore gumi aine Hardware inokwanisa kutsigira makumi matanhatu nematanhatu imhosva. Uyezve, kugoverwa kweGNU / Linux hakufanirwe kuve nechinangwa chekukwezva vashandisi kana kuvafadza vese. Iyo seti yezvishandiso izvo isu pachedu tinoona zvichibatsira. Kana akafunga kugadzira izvi kuti zvinakidze kana nekuti ndiyo nzira yake yekuona kugoverwa, gamuchirwa. Kunze kweizvozvo ini ndinoona chiri chinoshamisa kwazvo kuchengetedza kugovera uri wega.
Kuremekedza kwangu kune demm. Uye kwaziso kune vese!
Kwakanaka kutaura. Ndinozviteerera zvizere. Pasina kuiisa, iwe wakanzwisisa zvirinani nezvazviri kupfuura vazhinji veavo vakaiisa.
pakupedzisira, yakanakisa kutaura, iwe ungadai usina kuitsanangura zvirinani
[izvo zvakandibvumidza kunyora mapakeji "uye" kuaisa. ]
Chinhu chakakodzera kuita "uye wovaisa."
Ndatenda nekugadziriswa ... uye nekupindura.
Ndine urombo nemubvunzo, ndanga ndichishandisa Xubuntu kwenguva yakareba uye sezvo ndine mwedzi mishoma yemahara ndinogona kuchinja kugovera, izvi zvakabata pfungwa dzangu, ndinongova nechinodikanwa, mumwe munhu akaisa nharaunda yekuvandudza haskell mune ino kugovera? Ndinofanira kuva nechokwadi sezvo basa rangu rinoenderana neizvi ...
Laburás in Haskell!? Groxo, ini handina kumbobvira ndasangana nemunhu chaiye akarongwa mumutauro wevatorwa uya!
Nezve iyo distro: kana iwe uine nguva yekuyedza, enda kumberi. Tarisa kutanga kana ichipakata iyo Haskell compiler, ndinofunga kudaro.
2. Iwe unotsunga kunyora chinyorwa chinotaura nezve mutauro uye neruzivo rwako iwe pachako? Ndakaverenga zvakawanda nezvazvo asi handisati ndamboedza chero chinhu ...
Zvakanaka, kuve uchikunguruka kusvika kune wekupedzisira, kwave kuri kubva yechi20 pasina kukwidziridzwa.
Pindura kune risco
Regedza shasha hemlock, pane zvirinani zvinhu zvekuseni !!
Handizive kuti wave neLinux kwenguva yakareba sei, asi avo vedu vanga vachityora mabhora edu kwenguva yakareba vane mazita ekuremekedza ezvese zvido: Lesbian, openSUCIO, Pedorra, RedRat, Garch (Argentine slang = garcha), openPodrida , Gentooza, Ubuntu (muajeje) ...
Uyo akaponeswa ndiSlack, kusvikira zvino, izvo zvandinoziva, hapana munhu akamuwana zita remadunhurirwa 😀
uko unoenda imwe nyowani kubva muchoto
Slack = Escrap kana Chirafu
Yakanyorwa pasi 😀
Ndakaiona, ndakaiyedza, sinema roller mune nyowani i5 ine HD4600 mifananidzo, zvese zvakanaka kubva pakudhonza. Yakanaka kwazvo uye yakanaka kwazvo, kanoni, iyo i5 ine SSD uye 15Gb RAM inobatsira zvakare. Ipapo ndakaona iyo 64bit, Spotify ... steam ... ndakaverenga, ndakanzwisisa. ZVAKANAKA. Hapana chinetso. Izvo hazvikodzere nhoroondo yangu. Uye ndizvozvo.
Ndeipi mania ine iyo ye: "yakanakisa distro ndiyo yandinoshandisa" OpenSucio?
Nyadzi, nekuti ini ndanga ndichiedza kubata mhepo kuKDE yandisati ndambokwanisa, uye yaive yakanaka kwazvo muKaOS.
Ndekupi kwaunogona kurodha kaos kdm theme?
Ndakaiyedza kuyedza kudzokera ku KDE, nekuti zvandakaona naKubuntu, Fedora, nezvimwe .. hazvina kundigutsa (zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ini handiyedze mumuchina chaiwo, ndinozviita nekuisa muchikamu chakatsaurirwa izvi papc yangu) uye chaizvo, zvakandishamisa zvikuru kugovera uku! Inokurumidza… kukurumidza kwazvo! Iyo ine yazvino, uye kusarudzwa kwesoftware ndiko kwakanyanya, kushoma kana kuchienzaniswa nevamwe, asi hongu! Hunhu hwakanaka kwazvo! Ini ndanga ndatojaira kuita gnome, kubvira KDE3, asi zvinoita kwandiri kuti ndiri kuzodzokera ku KDE, chaizvo kuKaos. Ini ndinozvikurudzira zvizere.
Ini ndinonzwa kuti iyi distro iri kuyedza nevashandisi, zvinonditadzisa zvakawanda mune zvandinoda, nei kugoverwa kweLinux kuchindiganhurira nemaapplication ayo anongogadzirwa neino distro anofarira? panosara linux rusununguko zvinoita kunge zvinopesana kuti kugoverwa kunonditadzisa, ini ndatozvirapa pachangu kubva kune dystroitis kubva pane zvangu ruzivo ndinokurudzira TANGLU chiGerman distro sediki saOS inouya mune ese KDE 4.11.5 uye GNOME 3.10.1 muhurumende Yakachena ine kernel 3.12.1, mune yangu ini handisi kukwanisa kuwana bug rinokanganisa system yangu, kunyangwe iyi distro ingangogara iine zvigadziriso zvazvino mumadura ayo, kana iwe uchida kuti TANGLU itaridzike senge kaOS ingo tora iyo KDE vhezheni uye chinja iyo Wallpaper, kukwazisa.
Anke aive nerusununguko rwekugadzira iyo distro uye nekuwedzera chero chaaida. Une rusununguko rwekuishandisa kana kwete. Icho chokwadi chekuve OpenSource kana Mahara Software hachimumanikidze kuwedzera zvaunoda kana iwe kuti ushandise kugovera. Zviri nyore kudaro 😀
ndakangoputika neichi chirevo.
Ini ndinofanira kuenda kuGUINESS ...
Ndakazviedza uye ini ndaizoti ndiyo KDE Elementary, yakanaka kwazvo, asi yakati vharirane payo pachayo ... handifunge kuti ingoriwo chiitiko.
Jairo alberto akadaro
Ndino kwazisa vanhu vese. Nekuremekedza uko isu tese tinokodzera uye tinokodzera, ndinoda kubvunza zvinotevera:
* Nei zviri izvo kuti vashandisi vemberi veGNU / Linux vari smug, vanogumbura uye vanogumbura?
* Iwe unofunga kuti iko kugona kunokurudzira vatsva kuedza GNU / linux?
* Nekuda kwevanhu vakadaro, vazhinji vedu hatiise njodzi neGNU / Linux; Zvakanaka, maforamu ekuverenga isu tinoona nzira iyo vamwe, nekunyepedzera kwevakachenjera, vanotibata nayo.
* Unongofanirwa kutarisa, semuenzaniso, pandima yekupedzisira yeiyo msx chirevo: «… Usati waenderera mberi nekuratidzira mahara nezve chimwe chinhu chausingazive - uye ramba uchingosekesa muchiito chimwe chete ichocho - ndinokukoka zvakare kuti uverenge nei nei distro pawebhusaiti yavo uye shanyira iyo distro's irc chiteshi. »
Pindura Jairo Alberto
Hakuna kupi kune mitemo yekuremekedza, ndiregererewo kukuudza, hazvisi zvekuvenga.
Asi iro harisi "linux dambudziko" enda kune chero imwe nharaunda uye iwe unowana iwo mamwe matambudziko ... hazvisi zvekuve "mushambadzi mushandisi", hunhu hwemunhu wega wega, zvaunotaura zvinoita kunge zvakapusa kwandiri , mukoma.
Pff, ini ndakanga ndisina kuona chirevo chako, asi handina kushandisa ...
Ivo vanotenda vamwari nekuti ivo vari muboka reanonzi "epamberi."
Parutivi pako uye mune iyi nyaya mukusiya, ndiri, ziva.
Dambudziko rako nderekuti, iwe unogona kunge uriwo kana iwe ukasasarudza kuve crybaby - uye wepakati.
1.: «Zvese uye zvese» ndeye redundancy uye LANGUAGE HORROR. Kunyangwe iwe uchizvida kana kuti kwete muchiSpanish "zvese" zvinosanganisira "zvese", nekuda kwekusanzwisisika kwemutauro muhuwandu hwayo, ndewemurume. Mimwe mitauro senge Chirungu inowanzo kuve yakajairika uye mimwe yakaita seFinland haina kana vakomana uye nekudaro zvinyorwa zvinovatumidza.
Naizvozvo "munhu wese" haazi "akajeka", ihwo hutsinye hwedimikira, kunyangwe vanhu vasina kuverenga vanotaura kudaro.
2nd. "Sei zvichidaro kuti vashandisi vepamberi veGNU / Linux vari smug, vanogumbura uye vanogumbura?"
Uhwu ndihwo chaihwo hupenyu, kwete imwe yerudo mukati mevhiki masikati fungidziro.
Naizvozvo munhu wega wega ane hunhu hwake, vamwe ndevamamwe maitiro uye vamwe vevamwe, vamwe vanogona kunge vane zuva rakashata uye vamwe hupenyu hwakaipa.
Kunyangwe iwe uchishanda muhofisi, mune yemuchina yemusangano kana mune yakadzidza chikoro, iwe unowana izvo zvakafanana maitiro. Muchokwadi: iwe hauzive kuti chiBritish boarding chikoro chii, iwe?
Ikoko iyo beche harirarame maminitsi mashanu 😀
Usave pussy, tora izvo zvinokushandira, ndakafarira zvakasara ndokuenderera mberi.
"Iwe unofunga kuti neiyi aptitude vanokurudzira vatsva kuedza GNU / linux?"
Ngatione: Ini handifunge kuti chero munhu anokumanikidza kuti ushandise linux, oka?
Kwandiri, bhadhara rezinesi reiyo OS isina kuchengetedzeka, yakaratidza kuti inounza spyware, iyo inopunzika, iyo inonetesa, yakavharwa uye isinganzwiki yekuvandudza kutenderera, yakaoma - mupfungwa yekuti haibvumidze kuimisa uye kuishandisa sewe tarisira - uyezve zviri nani kwazvo kupfuura iyo yeGNU / Linux standard.
Kana mumwe munhu akaronga zviitiko kana maakaundi nezveLinux ndeyekuparadzira kuziva, kuti vamwe, vasiri chikamu chemakomputa nharaunda, vanoona kuti ruoko runouya sei chaizvo. Asi ngatione: hapana munhu anobatsirwa nekuti iwe unoshandisa Linux kana kwete, iye anowana ndimi chete. Zvimwe zvese ticharamba tichizvishandisa, kunyangwe iwe uchizvishandisa kana kwete pachako. Naizvozvo iri harisi chitendero, sezvitendero - chero munhu -, hapana munhu anoda 'kukushandura', kana mumwe munhu akakuudza nezveLinux imo nekuti vanofunga kuti vanogona kukuitira zvakanaka, kwete iye kana iye.
Ndichiri kuomerwa nekunzwisisa kana vanhu vakauya nemhando iyi yeupenzi uye isina musoro kufunga, zvisina kujairika 😛
«* Nekuda kwevanhu vakadaro, ndezvekuti vazhinji vedu hatiise njodzi neGNU / Linux; ", Maforamu ekuverenga tinoona nzira iyo vamwe vanotibata nayo nekunyepedzera kwevakachenjera."
Ehezve, zvisati zvaitika zvakafanana neDOS, ine Windows uye nechero zvimwe zviitwa zvevanhu: kutamba nhabvu, kuita karate, kudzidza kuita chando, kutsvaira, kuveza, kunyora nyaya, chero chaunoda.
Zvekare, iwe hausi musikana mudiki kuti uende uchichema pamusoro penzvimbo dzakakura dzewebhu. Iwe unoda kudzidza kutamba tango / salsa / swing / chero uye ivo vanokupedzera iwe kune trunk? Pano zvakafanana. Usave fucking pussy.
«Iwe unofanirwa kungotarisa, semuenzaniso, pandima yekupedzisira yeiyo msx chirevo:"… Usati waenderera mberi nekuratidzira mahara nezve chimwe chinhu chausingazive - uye ramba uchingosekesa muchiito chimwe chete ichocho - ndinokukoka zvakare kuverenga nei chikonzero che distro pawebhusaiti yavo uye kushanyira iyo distro's irc chiteshi. "
Ehe Corso Gómez, uye zvikonzero zvangu zvandinazvo, kutanga nezvazvo, vasikana vakaita sewe vanokumbira zvese zvakagayirwa nekutsenga
NGATIONEI, ZIVO INGUU / LINUX YEMAHARA uye YEMAHARA: CHETE CHINHU CHINOSHAYA KUTI UVE NECHIDZIDZO CHOKUDZIDZA, KUSA KUTI URI KUNYANYA MAFUTA ASS UYE UNODA ZVESE ZVINODZIDZWA.
Mapurojekiti eF / LOSS anoitwa nevanhu mumwe nemumwe aine zvido zvake nezvaanoda. FUNGA NEZVAKO RAKANAKA KUTI UNGAKWANISA KUSHANDISA CHIMWE CHETE, NEKUTI KANA CHINGAVE CHAKO, TICHIRI KUMIRIRA KUTI UDZIDZE KUPROGRAM. Naizvozvo, usati 'wanyunyuta' nezvechimwe chinhu, mutende; Ipapo ndakadzidza kuti zvinoshanda sei, ndosaka uchinyunyuta uye wozopedzisira waongorora kuti ungazvigadzirise sei zvichibva pane zvine musoro uye zvehunyanzvi nharo, kwete 'zvaunofunga', nekuti 'iwo mafungiro' evaya vasingazive zvishoma nezve izvo zvavari kutaura nezve HAZVINOBATSIRI.
Zvekare, iyo webhu haina kufanana nehupenyu chaihwo_, HURI HUPENYU HUPENYU, pano iwe unowana chinhu chimwe chete icho iwe chaunogona kuwana mune chero chimwe chiitiko chevanhu nemusiyano wekuti pano vanhu vanowanzove vashoma kana kwete zvachose vanyengeri uye vane zero shiviriro yevanhu vasinganzwisisike.
Hapana munhu anozvarwa achiziva uye kana mumwe munhu aine basa rechokwadi rekudzidza isu tese tiri pano kuvabatsira, pachokwadi webhu ichaita senzvimbo inoshamisa kwese kwavanoenda nekuti vazhinji vesaenzi yemakomputa, kunyangwe kana isu tine dzidziso yekudzidzira, vane pfungwa dzesainzi , vanoda kuziva uye vanozvidzidzisa-ivo, saka kuwana mumwe munhu akafanana nesu isu tinoda.
Ko kana pasina munhu anotsungirira pawebhu, kunyanya avo vanoziva zvakanyanya, ibenzi "ndine kodzero yeku ... X". Kwete, iwe chete une mvumo yekuvhara muromo wako. Ruzivo rwuri kunze uko, enda, utsvage, dzidza uye CHETE paunowana show-stopper ndinodzoka.
Zvikasadaro, ita sezvagara zvichiitwa neWindows: bhadhara kosi, mudzidzisi uye rega ndikudzidzise. Uye kuratidzira zvese zvaunoda kwaari / kwaari uye zvaunomubhadhara - kana chero zvavanogona kutsungirira.
"Hausi inoshamisa, yakakwana chando chando." - Chuck Paleniuk
«Iwe unokosha chete kuna amai vako, kune vamwe vedu iwe wakakosha… neimwe nzira.» - yakakurumbira quote pane 4chan / Reddit / Slashdot
Uye ichi chingori chirevo chakakura kubva kune anopenya Stephen Fry, zvakanyanya mukuenderana nemapussies uye nepakati nguva dzatiri kurarama madziri. http://i.imgur.com/TXujeoV.jpg
Errata (pane zvikanganiso zvishoma asi zvinoreva zvinonzwisiswa, ichi ndicho chete chakakosha):
"NEKUTI KANA ZVINGAVE ZVAKO, TICHIRI KUMIRIRA KUTI UDZIDZE KUPROGRAM"
* KANA ZVAKANGA ZVAKAITIKA
Munyika yangu vanhu vari kuramba vachiwedzera hutsinye, kunyangwe munhau unogona kunzwa vanhu vanozviti 'vatapi venhau' vanotaura kudaro, zvinonyadzisa ... Uye, handitende kuti zvakandibata, zvinotyisa 😛
Ha, usandiita kuti ndiseke: ikozvino zvinoitika kuti iwe unoda kutidzidzisa nezve mutauro wechiSpanish. Izvo chete izvo zvaive zvisipo kubva kune ino petulant ... hahahahaha.
Ndiri kukufananidza, mafuta. Uye hongu, ndinoziva zvandiri kutaura nezvazvo, "Kunyanya kutaura kwevanhu uye kuzvitaura" yaive imwe yehurukuro dzedu zhinji dzandaive ndaita newaimbova musikana prof. dzetsamba.
Asi hei, pane kutora izvo zvinoshanda iwe uye kudzidza - uye kubata chimwe chinhu - unosarudza kuzviita benzi iwe pachako.
Ndanga ndiine KaOS kwemwedzi mishoma uye iri distro inoita kuti ndinyatsofara.
Ndadzidza zvakawanda, uye ine nharaunda yakasarudzika ...
KaOs ane ramangwana rakanaka, zvisinei handigoni kunzwisisa paakakwakuka kubva padhesiki rake guru achienda kune rimwe rebhuruu, zvinoita sekunge iyi yaive nzira yekudzoreredza yandisinganzwisise, imwe pfungwa ndeyekuti hazvisi nyore kusvetuka kubva kuKaOs kuArchlinux yakadai seArtergos kana Parabola, iyo isingape chinetso kana iwe uchida kuenda kuArch iyo imwe nzira inofanira kunge iripo muKaOs.Kune rimwe divi, Caligra inofanirwa kunyatsochinja uye kugamuchira openofice uye mafomati eZwi zvakanyanya zvishoma. Ndinoyemura kana mumwe munhu achigona kundibatsira kuziva zviri kuitika, kubva pane imwe nguva kuenda kune imwe desktop rakazviratidza kwandiri nechitarisiko chebhuruu chisingandinetse asi ini handinzwisise kuti sei
Anke akaita basa rakanaka, senguva dzose. Kuti uzviedze.
Peerflix kana nzira yekuyerera nzizi
Linux Mint 17 Ruzivo